Ahoana ny fomba hanaovana ny mailaka mailaka amin'ny finday | Martech Zone
“Herintaona mandavantaona, nanomboka ny volana martsa 2011 ka hatramin'ny martsa 2012, ny mailaka misokatra amin'ny fitaovana finday dia nitombo 82.4 isan-jato,” araka ny antontan'isa finday Return Path. Ny fanaovana finday ho ampahany amin'ny ezaky ny marketing mailaka anao dia tsy ho an'ny fampielezana mailaka mandroso intsony; ilaina izany.
Vao tsy ela akory izay, Delivra dia namoaka ny fomba fanaovana ny mailaka fivarotana mailaka amin'ny finday, loharano izay manolotra fironana, statistika ary tolo-kevitra momba ny finday amin'ny 2012 amin'ny fanomanana ny varotra mailakao ho an'ny mpihaino eo an-toerana.
Ny whitepaper dia miresaka singa telo tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny mailaka amin'ny finday sy ny tetika ilaina hampiasana tetika toy izany.
Aiza ny mpihaino anao mamaky mailaka?
Mamorona atiny ho an'ny mpamaky finday ve ianao?
Mahafinaritra ny findainao amin'ny famolavolana ny mailaka?
Ho an'ny valin'ireto fanontaniana ireto sy hahazoana antoka fa tonga amin'ny vanim-potoana finday ny mailakao dia ampidino ny whitepaper ho namana namana finday mailaka.
Ny 80% -n'ny mpanjifa dia mahita fa mora kokoa ny mamaky mailaka amin'ny marketing amin'ny findainy noho ny amin'ny PC. Mamorona mailaka azon'ny mpihaino vakiana mora foana sy setriny amin'ny findainy ve ianao? Raha tsia dia azo inoana fa hafindra any amin'ny fako io. Aza avela hitranga izany!
Tags: delivramailaka MarketingFivarotana finday sy tablettemailaka findayfironana finday
May 16, 2012 ao amin'ny 5: 39 PM
Misaotra namoaka an'ity. Vao niresaka tamin'ny mpanjifa iray isika androany momba ny maha-zava-dehibe ny finday ary ny maha-zava-dehibe ny fanararaotana azy io nefa eo am-piakarana haingana toy izany!